မုဒွန်းကျောက်သင်ပုန်း ကျောက်များကို ဈေးကွက်စမ်းသပ်မှု အဖြစ် ကြမ်းခင်းကြွေပြားများ ပြုလုပ? - Yangon Media Group
မော်လမြိုင်၊ အောက်တိုဘာ ၆
မွန်ပြည်နယ်၊ ချောင်းဆုံမြို့နယ် မုဒွန်းကျေးရွာမှထွက်ရှိသော မုဒွန်း ကျောက်သင်ပုန်းများဈေးကွက် အနည်းငယ်သာရှိတော့သဖြင့် အဆိုပါကျောက်သင်ပုန်းကျောက်များကို အလှဆင်ကြွေပြားများစမ်း သပ်အသုံးပြုပြီး ဈေးကွက်သို့ အစားထိုးတင်ပို့နိုင်ရေးအတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း မုဒွန်းရွာသားတစ်ဦးထံမှ သိရသည်။
”အခုမှသတိရလို့ စမ်းသပ် ကြိုးစားနေရုံပဲရှိပါသေးတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတံတား(ဘီလူးကျွန်း) ပြီးသွားတော့ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းလာတယ်။ ကုန်ကျစရိတ်တွေလည်း အများကြီးသက်သာလာတယ်။ ကြွေပြားထက်လည်းပိုပြီးသိပ်သည်းကျစ်လျစ်တယ်။ အလေးချိန်ပိုစီးတယ်။ ကြွပ်ဆတ်မှုနည်းတာကိုလည်း တွေ့ရတယ်။ ကြွေပြားထက်ပိုပြီးအကြမ်းခံနိုင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ကြွေပြားထက် ဈေးနှုန်းပိုများတယ်။ ဒေသထွက် အလှဆင်ပစ္စည်းဖြစ်လို့ အမြတ်တနိုး သုံးချင်သူတွေအတွက်ရည်ရွယ်တာပါ” ဟု မုဒွန်းကျေးရွာမှ ဈေး ကွက်ဖော်ထုတ်ရန်ကြိုးပမ်းနေသူ ဦးဝင်းမွန်က ပြောသည်။
မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာ အားလုံးလိုလိုက မိမိတို့၏ လက်မှု ပစ္စည်းထုတ်ကုန်များကို ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပသို့ တင်ပို့ရောင်းချနိုင်ရေးကို ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိ ကြောင်း၊ ယခင်ကဆိုလျှင်ရွာလွတ် ကျေးရွာမှ ဆေးတံ၊ တုတ်ကောက်နှင့် ရော်ဘာထွက်ကုန်ပစ္စည်းများကို အနယ်နယ်အရပ်ရပ်သို့ တင်ပို့ ရောင်းချခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ ”တစ်ပေပတ်လည်ကျောက် ပြားတစ်ချပ်ကို ကျပ် ၁ဝဝဝ၊ လေး လက်မပတ်လည်တစ်ချပ်ကို ကျပ် ၁ဝဝ နှုန်းထားသတ်မှတ်ထားပါတယ်”ဟု ဦးဝင်းမွန်က ဆက်လက် ပြောကြားသည်။
စစ်ကိုင်း ကောင်းမှုတော် ဘုရားကြီးသို့ ဝါတွင်းဘုရားစဉ် အရုဏ်တော် ဝတ်အသင်းများ အရုဏ်ဆွမ်း သွ?
ပြည်ပသို့ ရော်ဘာ တန်ချိန် နှစ်သန်းကျော် ထုတ်လုပ် တင်ပို့မည်